Inona no tokony hataonao rehefa misy vay? - Mahandro aho
Inona no tokony hotafinao rehefa vay ianao?
Inona no hosaronan'ny vay?
Tokony hametraka bandy eo amin'ny vay ve ianao?
Ahoana no fanalana haingana ny vay?
Tokony hosaronanao vay alohan'ny hisehoany?
Ny vay dia vokatry ny fahalotoana?
Afaka manampy vay ve ny menaka nify?
Afaka mitondra vay mankamin'ny loha ve i Vicks?
Mahasitrana ve ny vay tsy vaky?
Ho mivoaka irery ve ny vodin'ny vay?
Tsara amin'ny vay ve ny Vicks VapoRub?
Fa maninona no vay ny olona?
Inona no menaka manitra tsara indrindra ho an'ny vay?
Azonao atao ve ny mametraka Vaseline amin'ny vay?
Mandra-pahoviana ny faharetan'ny vay?
Ahoana raha nipoitra vay aho?
Ampiasao ny lamba famaohana an-tsokosoko amin'ny vay. Raha vao raraka ny vay dia tazomy ho maina sy hadio izy. Sarony moramora amin'ny akanjo milina tsy mando ny vay. Mampiasà kasety fanampiana voalohany mba hitazomana izany.
Mametraha lamba famaohana mafana sy lena eo amin'ny vay imbetsaka isan'andro. Manampia tsindry kely rehefa mitazona ny lamba fanasan-damba amin'ny toerany fa tsy manindrona mivantana ny vay. Vantany vao vaky voajanahary ny vay, dia tazomy amin'ny fehin-kibo vaovao na madio. Izany dia hitazona ny aretina tsy hiparitaka amin'ny toerana hafa.
Asio fehy eo amboniny mba tsy hiparitahan'ny fantson-drano. Ovay isan'andro ny bandy. Raha ritra ho azy ny vay dia avelao hivoaka. Tohizo ny fanadiovana azy indroa isan’andro amin’ny savony sy rano.
Fitsaboana amin'ny vay - Fanafody an-trano
Asio famatrarana mafana ary alemana anaty rano mafana ny vay. Izany dia hampihena ny fanaintainana ary hanampy hisintona ny nipoaka ho etỳ ambonin'ny tany. …
Rehefa manomboka raraka ny vay dia sasao amin'ny savony misy bakteria mandra-pialan'ny nono rehetra ary hadio amin'ny alikaola manosotra. …
Aza atsofoka amin'ny fanjaitra ny vay.
MAHALALA IZAO: Mandra-pahoviana no handrahoana ny rambon'ny lobster lehibe?
15 nov Desambra 2019
Raha vantany vao misokatra ny vay dia sarony mba hisorohana ny aretina amin'ny ratra misokatra. Mampiasà gauze na pad misoroka mba tsy hiparitahan'ny pus. Ovay matetika ny gauze na pad.
Ny vay miverimberina dia mifandraika amin'ny fahadiovana tsy madio, tontolo maloto, fifandraisana amin'ireo olona voan'ny aretin-koditra sasany ary tsy mandeha tsara ny rà. Mety ho mariky ny hery fiarovan'ny vatana malemy koa, ohatra, noho ny diabeta, fampiasana steroid maharitra, homamiadana, aretin-dra, alikaola, sida, ary aretina hafa.
Na izany aza, ny fanafody an-trano toy ny fanosotra tantely, calcium, pâte, curd, sns, dia mety tena ilaina tokoa ho an'ireo izay vay vonjimaika ary tsy dia be loatra. Tsy maintsy atao anefa ny manatona dokotera raha tranga miverimberina sy maharary izany isaky ny mandeha.
Ny ratra madio sy maina nopetahany Vicks ary rakotra fehin-kibo, na tsy misy fantsom-panafana na tsia, dia mety hiteraka vay maharary amin'ny lohany.
Fikarakarana samirery ny vay
Ny vay dia afaka manasitrana samirery. Mety hanaintaina kokoa anefa izany rehefa mitombo hatrany ny pus ao amin’ilay ratra. Raha tokony hipoitra na hisintona ny vay, izay mety hiteraka areti-mifindra, dia karakarao tsara ilay vay.
Rehefa mandeha ny fotoana, ny vay dia hampivelatra fanangonana pus any afovoany. Izy io dia fantatra amin'ny fototry ny vay. Aza manandrana manala ny fotony ao an-trano satria ny fanaovana izany dia mety hahatonga ny aretina hiharatsy na hiparitaka amin'ny faritra hafa. Ny vay dia afaka mandeha irery tsy misy idiran'ny fitsaboana.
MAHALALA IZAO: Hafiriana no tokony handrahoana spaghetti?
Ny roa amin'ireo akora mavitrika ao aminy - menthol sy camphor - dia analgesika malefaka (mpanala fanaintainana) ary ampiasaina amin'ny menaka fanefitra. Ny VapoRub koa dia manampy ny vavony ho vaky sy tatatra, izay manome fanamaivanana bebe kokoa.
Ny ankamaroan'ny vay dia vokatry ny Staphylococcus aureus, karazana bakteria matetika hita amin'ny hoditra sy ao anaty orona. Mipoitra ny fivontosana rehefa manangona eo ambanin'ny hoditra ny pus. Indraindray ny vay dia mipoitra eo amin'ny toerana izay vaky ny hoditra noho ny ratra kely na ny kaikitry ny bibikely, izay manome fidirana mora foana amin'ny bakteria.
Menaka fanefitra antibiotika lafo dia lafo
Satria maro ny olona mitahiry fantsona Neosporin ao anaty vakiteniny fanafody, mety tsy mila mijery lavitra akory ianao vao mahazo azy. Mety hanampy amin'ny fitazonana ny aretina tsy hiparitaka koa izy io. Apetaho amin'ny vay ny antibiotika, fara fahakeliny, indroa isan'andro, mandra-pahatapitry ny vay.
Asio menaka manitra jelly solika hiarovana amin'ny fikorontanana. Asio menaka manitra antibiotika raha mipoaka ny vay mba hisorohana ny aretina. Araraoty ny fanafody fanaintainan'ny mpitsabo mba hifehezana ny alahelo raha ilaina izany.
Ny vay dia mety maharitra 1 ka hatramin'ny 3 herinandro vao sitrana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy mahasitrana ny vay raha tsy misokatra sy miala. Mety haharitra herinandro izany. Matetika ny carbuncle dia mila fitsaboana avy amin'ny mpitsabo anao.
Ny fametahana vay dia mety hampiditra bakteria amin'ireo sosona lalina amin'ny hoditra na ny lalan-dra. Mety hiteraka areti-mifindra mahery vaika kokoa izany. Ny dokotera dia afaka manala vay tsara ary manome fanafody antiseptika na antibiotika raha ilaina izany.
MAHALALA IZAO: Inona no mahatonga ny vay ao amin'ny vody?
Maharitra hafiriana ny voanjo vao masaka?
Maharitra ela ve ny voanjo vao mahandro? Dingana 2: Andrahoy ny voanjo lava kokoa noho ny
Fanontaniana: Nahoana no mila hery bebe kokoa noho ny fandrendrehana ny fandrahoana?
Ny fiovan'ny dingana avy amin'ny ranoka mankany amin'ny gazy dia mitaky angovo bebe kokoa satria ny fatorana dia tsy maintsy
Azonao ampiasaina indray ve ny vay-foza?
Afaka mihinana vay foza sisa ve ianao? Azonao atao tsara ny manafana ny hazan-dranomasina hatramin'ny
Fanontaniana matetika: Mety hipoaka ve ny vato raha andrahoina?
Azo antoka ve ny mahandro vato? AZA MANDRAKA VATO MIHITSY! Na inona na inona izany
Fanontaniana matetika: Mahasalama ve ny ham andrahoina?
Ny Ham dia manankarena proteinina, mineraly ary otrikaina hafa izay manohana ny fahasalamana tsara indrindra. ny
Fanontaniana matetika: Azonao atao ve ny manisy alikaola amin'ny vay?
Rehefa manomboka ritra ny vay, dia sasao amin'ny savony antibaktera mandra-pahandroana
Afaka mampiasa ronono miompana fa tsy ronono ao anaty lafaoro?
Nanontany ianao hoe: Afaka manamboatra lafaoro kely ve ianao?
Ahoana no itahirizanao ny vary masaka mandritra ny herinandro?
Inona ny vy tsy misy atahorana azo antoka indrindra amin'ny fandrahoana sakafo?
Mandra-pahoviana no endasina amin'ny tongotr'akoho amin'ny 375 degre?
Mandra-pahoviana no hahandroanao makamba mangatsiaka?